नेपाल आज | नेपालबाट अर्गानिक तरकारी मात्रै युएई पठाउने हो भने पनि नेपाली किसान मालामाल हुन्छन् (भिडियोसहित)
अन्तरवार्ता प्रवास भिडियो अर्थ कर्पोरेट
नेपालबाट अर्गानिक तरकारी मात्रै युएई पठाउने हो भने पनि नेपाली किसान मालामाल हुन्छन् (भिडियोसहित)
काठमाडौं । डा. आसिफ अलि सिद्दिकी दुबईलाई आधार बनाएर नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकमा लगानी गर्ने नेपाली उद्यमी हुन् । डा. सिद्दिकी दुबईका नेपाली व्यापारी, व्यवसायीहरूको संगठन नेपाली बिजनेस काउन्सिलका अध्यक्षसमेत हुन् । हालै नेपालमा युएईले के कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सो देशको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । प्रतिनिधि मण्डलमा डा. सिद्दिकी पनि सहभागी थिए । दुई मुलुकका सचिवस्तरीय छलफलमा विभिन्न विषयहरू उठे । सोही सेरोफेरोमा रहेर डा. सिद्दिकीसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य मुख्य अंश निम्नानुसार छन् :
नेपालमा लगानीको सवालमा भएको नेपाल र युएईका सरकारी अधिकारीहरूबीचको वार्तामा तपाईं बस्नु भयो, सो वार्ताबाट तपार्इं कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक हो । र, उपयुक्त समय पनि यही हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न नेपालसँग सबै विषयहरू छन् । युएई र नेपाल आउजाउ गर्न चारदेखि पाँच घन्टा लाग्छ । पर्यटन विकासको दृष्टिले होस् वा आर्थिक विकासको दृष्टिले यो दूरी बढी होइन । तर, आजको दिनमा विकासका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । हामी धेरै कुरामा पछाडि छौं । अर्थात् विकास गर्न धेरै बाँकी छ । यसैलाई अवसर भन्ने गरिन्छ । यो अवसर हामीले उपयोग गर्न सक्छौं र गर्नु पर्छ ।
युएईका हामी व्यवसायीहरूले पनि सोचेको कुरा यो हो कि आजको दिनमा नेपालसँग सबैकुरा छ । कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार विकास जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विकास गर्न जरुरी छ । नेपालको विकासमा हामी पनि एक अंश हुन चाहन्छौं । र, हामी युएईमा भएका नेपाली व्यवसायीहरूले के महसुस गर्‍यौं भने नेपाल र युएईबीच हुन सक्ने व्यापारमा केही सहजीकरण गर्नु आफ्नो दायित्व हो । यसकारण हामी अहिले नेपालमा छौं ।
नेपाल र दुईबीच संवाद पनि भयो । त्यो अत्यन्त सकारात्मक रह्यो । हामी नेपाल र युएईबीचको सम्बन्ध दीर्घकालसम्म सुमधुर हुनेछ । पछिल्ला दुई वर्षको कुुरा गर्ने हो भने त नेपाल र युएईबीचको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर भएको हामीले ठानेका छौं किनभने दुबईमा दूतावास खुल्नाले दुई मुलुकबीचको राजनीतिक सम्बन्ध पनि बलियो भएको आभाष हुन्छ । राजनीतिक सम्बन्ध अब व्यापारिक सम्बन्धमा पनि परिणत हुँदैछ । यो सम्बन्ध बलियो होस् भन्नका लागि नेपाली बिजनेस काउन्सिलले सहजीकरण गरिरहनेछ ।
एनबिसी अध्यक्ष डा. आसिफ अलि शिद्धिकीलाई मायाको चिनो प्रदान गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे । तस्बिरः नेपालआज
नेपाली पक्षले ढुक्क भएर लगानी गर्न यएईलाई आग्रह गर्‍यो होला । कस्ता विषयहरू भए छलफलका क्रममा ?
युएईबाट नेपालमा सोझै लगानी आउनु धेरै राम्रो कुरा हो । नेपाली पक्षले केही कानुनहरू लगानी मैत्री हुने गरी सुधार गर्ने केही नयाँ कानुन ल्याउने जानकारी दिएको छ । यसबीच केही धेरै राम्रा राम्रा कुुराहरू पनि भएका छन् । जस्तो कि सतप्रतिशत स्वामित्व ग्रहणको कुरा र त्यस्तै दोहोरो करको विषयमा पनि राम्रै भएको छ ।
यसकारण अवसरहरू धेरै राम्रा छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै पक्षले दीर्घकालीन व्यापारिक सम्बन्ध निर्माणका लागि उत्साह देखाएका छन् । लगानीका लागि केही क्षेत्रको पहिचान हुनुपर्छ । नामै लिनु पर्दा कृषिमा सम्भावना छ । त्यसमा पनि कफी, चिया, अर्गानिक कृषि उपजहरू नेपालले युएईलाई निर्यात गर्न सक्छ । युएईले खाद्य सुरक्षामा नेपालसँग सहकार्य गर्न सक्छ । सबैजसो खाद्यवस्तुहरू युएईले खरिद गर्छ । यस्तोमा किन नेपालले युएईलाई कृषि उपज नबेच्ने ? नेपाल युएईबाट नजिक पनि छ ।
दोस्रो भनेको ड्राइपोर्ट हो । आयात निर्यातको बन्दोबस्त गर्न यस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ । यसका लागि लगानी आवश्यक छ । यसमा हामी पनि इच्छुक छौं । हामी कम्पनीहरूको समूहमा छौं । यसकारण हामीले स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषिमा पनि लगानी हुने सम्भावना छ ।
प्रवासी नेपालीहरूले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् तपाईंको बुझाइमा ?
मेरो धारणा सुन्न चाहनुहुन्छ भने म नेपालमा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ । त्यसमा पनि पर्यटन, आइटीजस्ता क्षेत्र ठीक हुन्छ । वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई ओसारपसार गर्न कठिन हुन्छ, किनभने हाम्रो देश भूपरिवेष्ठित छ । कृषिमा पनि सम्भावना राम्रो छ । आजको दिनमा अर्गानिक वस्तु पाउन धेरै गाह्रो छ । जताततै रासायनिक मल, विषादी मिसिएका वस्तु पाइन्छन् ।
नेपालमा त्यस्ता धेरै जमिन छन् जहाँ रासायनिक मल प्रयोग छैन । यसकारण नेपालले अर्गानिक कृषि उपज उत्पादन गर्ने र ती वस्तुहरूलाई आफ्नो ब्रान्ड बनाउनु पर्छ । हिमालय प्रोडक्टका रूपमा नेपाली कृषि उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने हो भने प्रशस्त सम्भावना छ । किनभने हिमालय भन्नुको अर्थ नै हुन्छ कि ठूलो । जब हामी हिमालय प्रोडक्ट भनेर कृषि उपज बेच्न थाल्छौं, मानिसहरूको अपेक्षा पनि उच्च हुन्छ । र त्यो बेला वस्तुको ब्रान्ड आवश्यक हुन्छ । ‘हिमालय प्रोडक्ट’ भन्नासाथ विश्वमा हाम्रा वस्तु बिक्छन् । तर, ती अर्गानिक हुन जरुरी छ ।
नेपालले उत्पादन गर्ने अर्गानिक कृषि उपजको बजार भनेको नेपालको तीन करोड जनसंख्या मात्रै होइन । भारतको सवा सय करोड जनसंख्या पनि बजार हो । त्यसमाथि भारतले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनमा कुनै प्रकारको कर लिँदैन । चीनले पनि सयभन्दा बढी प्रकारका उत्पादनमा कर लिँदैन । यसकारण नेपाल भनेको बस्नका लागि, उत्पादनका लागि, आफ्ना सामान ठूला बजारमा बिक्रीका लागि उपयुक्त भूमि हो ।
यति धेरै सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो, यसका लागि नेपाल आफैँले लगानी गर्न सक्ला कि अरू कुनै उपाय छन् ?
प्रवासमा रहेका नेपाली, नेपालकै निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ताले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । जहाँसम्म युएईको कुरा छ, नेपालबाट दैनिक चार पाँच उडान युएईमा हुन्छ । ती सबैमा नेपाली कामदार हुन्छन् । कार्गो भन्ने खास हुँदैन । यदि हामीले ती एअरलाइन्सहरूसँग राम्रो कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले निश्चित रकम लिएर नेपाली उत्पादन युएई पुर्‍याइदिन्छन् ।
हरेक दिन नेपालले ताजा तरकारी मात्रै युएई पठाउने हो भने फाइदै फाइदा छ । तर, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका उत्पादन भने हुनुपर्छ । जस्तो कि प्याकेजिङ, गुणस्तरको प्रमाणपत्र, आपूर्तिको सुनिश्चितता आदि हुनुपर्छ । सरकारले पनि यसमा केही त गर्नै पर्छ । जस्तो कि तरकारी उत्पादन त भयो, ल्याउने सडक राम्रो भएन भने समयमा आइपुग्दैन । काठमाडौं उपत्यकामा त खाली जमिन धेरै छैन । अन्य पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तु चाँडै विमानस्थलसम्म पुग्नु पर्छ । यी सबै कुराहरू असाध्यै राम्रोसँग प्रबन्ध गरिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नियमित र आवश्यक परिमाणमा वस्तु आपूर्ति गर्न सकिएन भने अर्थ हुँदैन ।
युएए र नेपालका प्रतिनिधि मण्डल, फोटो सेसनका क्रममा । तस्बिरः नेपाल आज ।
नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना पनि आैंल्याइन्छ, यहाँलाई के लाग्छ, नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सक्ला ?
जलस्रोतलाई ‘ह्वाइट पेट्रोलियम’ पनि भन्ने गरिन्छ । जलस्रोत नेपालको धेरै ठूलो सम्पत्ति पनि हो । नेपालको जलस्रोतले नेपालको पूरै अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गरिदिने सामथ्र्य राख्छ । पानी र उमेर उस्तै उस्तै हो । यदि युवा उमेरमै सोचेको गर्नु भएन भने बुढेसकालमा गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी पानीलाई पनि बग्दा बग्दै उपयोग गर्नु पर्छ । बगेर गइसकेपछि अर्थ हुँदैन । जलविद्युत्को विकासका लागि सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्छ । राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ । दुर्भाग्यले दुई दशक नेपालमा अस्थिरता भयो । अहिले भाग्य भनौं, राजनीतिक स्थायित्वको महसुस गरिएको छ । अबको सरकारले यो क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरू गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म युएईले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने युएई नवीकरणीय ऊर्जाका लागि विश्वभरमा धेरै लगानी गर्ने मध्येको देश हो ।
नेपालमा भएको छलफलका क्रममा युएईका सरकारी अधिकारीहरूले भन्नु भएको छ कि ‘नेपालमा कुन योजनामा लगानी गर्दा के कति लाभ हुन्छ, त्यो जानकारी होस् ।’ विद्युत् उत्पादन हुने हो भने बजारको समस्या छैन । नेपाल, भारत, बंगलादेश र तिब्बतमा पनि निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, अब आक्रामक भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । सुस्त चालले आर्थिक प्रगति गर्न सकिँदैन । पानीको राम्रो उपयोग गर्न सरकार अब सशक्त भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । जलस्रोत विकासको साधन हुनुपर्छ, बाढीका रूपमा विनाशक बन्नु हुँदैन ।
अझै भन्नुपर्दा हिमालयको पानी नै पनि हामी बेच्न सक्छौं । हिमालयको प्राकृतिक पानीमा विभिन्न मिनरल पाइन्छ । त्यस्तो विशेषता भएको पानी दुनियाँमा कतै पाइँदैन् ।
नेपाली बिजनेस काउन्सिलले नेपालमा लगानी गर्नेबारे केही योजना बनाएको छ ?
हो, हामीले यसबारे सोचेका छौं । हामीले हाम्रो देशमा लगानी गर्न सक्दा देशले विकास गर्छ । देशको छवि विश्वभर राम्रो हुँदा हामी विदेशमा बस्नेहरूप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदलिन्छ । नेपाली बिजनेस काउन्सिलमा राम्रा मानिसहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैले जसरी भए पनि नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ । नेपालका लगानी गर्ने सवालमा हाम्रो एउटै मत छ । हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा, कृषिमा वा कतै लगानी गर्न अत्यन्तै उत्सुक छौं, किनकी यो हाम्रो देश हो ।
नेपालमा लगानीको सम्भावना बारे छलफल गर्न आएको यएइको प्रतिनिधि मण्डलका साथ डा. शिद्धिकी । तस्बिरः नेपालआज ।
तपार्इंको ग्रुपको लगानी विश्वका धेरै देशमा छ । अन्यत्रको अनुभव पनि छ । अन्यत्र लगानी गर्न कति सजिलो छ, नेपालमा के कारणले गाह्रो छ ?
हामीले भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युएईलगायत मुलुकमा लगानी गरेका छौं । हाम्रो बुझाइमा यो संसार छिटो छिटो बदलिरहेको छ । धेरै कुराहरू डिजिटिलाइज्ड भएको छ । हरेक कुराहरू पारदर्शी भइरहेका छन् । सबैजसो कामहरूका लागि कागजपत्र चाहिँदैन । सजिलो र छिटो काम गर्ने विधि बनेको छ । नेपालमा पहिलो झन्झट भनेको डिजिटिलाइज्डका लागि गर्न धेरै नै काम बाँकी छ । सबै सरकारी निकायहरू अनलाइनमा जानै पर्छ । विदेशमा धेरैजसो काम अनलाइनबाटै हुन्छन् । नेपालमा सरकारी कार्यालय धाउनै पर्छ । यो थिति बदलिनु पर्छ । किनभने डिजिटिलाइजेसनले समय बचत गर्छ । पारदर्शिता हुन्छ । खर्च पनि कम हुन्छ ।
नेपालमा ३५ देखि ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुन्छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । खर्च भएकाको अवस्था हेर्ने हो भने गुणस्तरीय निर्माण हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालले कस्तो क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता तोक्नु पर्ला ?
यति धेरै रकम फ्रिज हुनु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो । हामीले जे जसरी हुन्छ, बजेटको उपयोग गर्नु पर्छ । भएको बजेटमा कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने भन्दा पनि सबैतिर गर्नु पर्छ । कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । सामानान्तर रूपले सबैतिर लगानी गर्ने हो । योसँगै राम्रा जनशक्ति उत्पादनका लागि लगानी गर्नु पर्छ ।
कामका लागि विदेशिने नेपाली युवालाई के सुझाव छ ?
हो, आजका दिनमा नेपालमा रोजगारी पाउन गाह्रो छ । जसका कारण युवाहरू विदेसिन्छन् । युवाहरूमा दक्षता कम हुन्छ भन्ने कुरा जुन छ, यसका फरक पाटा पनि छन् । जस्तो कि नेपालबाट युवाहरू कुनै दक्षता नलिई विदेसिन्छन्, तर, विदेशमा केही सिकेर अवश्य फर्किन्छन् । त्यो सीपलाई उपयोग गर्न त सकिन्छ । उनीहरूले जे सिक्छन्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ । अदक्ष कामदार विदेशमा पुगेर कम्तीमा अर्धदक्ष जनशक्ति त बन्छन नै । यो अवस्थाबाट पनि फाइदा उठाउँदा के फरक पर्ला र ?
दश हजार रुपैयाँको सेयर किन्दै प्रधानमन्त्री